Ukuhlanjwa kwesiqingatha selanga
I-KR-15 Ibhokisi ibhokisi 990 7.5 6.0 1.00 116.00 28.00 21.00
Isilinda yimveliso eguquguqukayo. Nokuba kungasetyenziswa kwesiphi isiganeko, ihlala ilungelelaniswa, hayi ngokukhawuleza. Kwaye kubonisa ubuhle obuthambileyo. Ngokungafaniyo noyilo lwesiko lombane, eli linesilinda kwisiqingatha esisezantsi kunye nombhobho omile njengo-J ngaphezulu, ukubonelela ngenye indlela yokongeza ubutyebi kwindawo leyo.
Uhlobo: rhoqo, ukutshiza ngesandla
Egqithileyo Isilinda enkulu yeshawari yelanga
Okulandelayo: Umbala wokwenza isilinda egobileyo yelanga